Free Download GBWhatsApp for PC Windows 7810 र म्याक
1 पीसी विन्डोज एक्सपी / / / / / .1.१ / १० को लागि जीबीडब्ल्याट्स एप (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
1.1 पीसी विन्डोजको लागि जीबीडब्ल्यूहट्स एप डाउनलोड गर्नुहोस्7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
1.2 पीसी विन्डोजमा जीबीवाट अनुप्रयोग अनुप्रयोगका सुविधाहरू
2 पीसी विन्डोजमा जीबीडब्ल्यूहट्स एपलाई डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका 10/8.1/8/7 र म्याक?
3 पीसीको लागि जीबीडब्ल्यूहट्स एप डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
पीसी विन्डोज एक्सपी / / / / / .1.१ / १० को लागि जीबीडब्ल्याट्स एप (32 बिट - 64 बिट) सित्तैमा
पीसी को लागी GBWhatsapp - केटाहरु!! यदि तपाइँसँग कसरी प्रयोग गर्ने बारे कुनै बिचार छैन जीबीवाट्स अनुप्रयोग तपाईंको पीसी विन्डोजमा 10/8/8.1/7, यदि हो भने यो तपाइँको लागि लेख हो.
यस लेखमा, तपाईं कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पीसी को लागी GBWhatsapp, ल्यापटप, र डेस्कटप को लागी सित्तैमा.
चरण विधि चरण, मैले डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि व्याख्या गरेको छु पीसी विन्डोजको लागि जीबीडब्ल्यूहट्स एप 7, विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, र विन्डोज 10 (32 बिट - 64 बिट).
अब, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download GBWhatsApp For PC (विन्डोज 10, 8,7र म्याक) यसलाई जाँच गरौं ...
जीबीवाट्स एप डाउनलोड गर्नुहोस् पीसी विन्डोज को लागी7/विन्डोज / / विन्डोज 10 सित्तैमा
व्हाट्सएप एक अरब प्लस डाउनलोडको साथ विश्वमा सबैभन्दा प्रख्यात सन्देश अनुप्रयोग हो. यसको ख्याति भए पनि, धेरै व्यक्ति अझै पनि लाग्छ कि यो फरक सीमितताहरु छ. जीबीडब्ल्यूहाट्स एपले नियमित व्हाट्सएपमा भएका धेरै नियम र गोपनीयता समस्याहरू समाधान गर्दछ.
जीबीडब्ल्यूट्स एपीके डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुप्रयोग पीसी को लागी GBWhatsApp अनुप्रयोग
अन्तिम अपडेट सक्छ 6, 2020
एन्ड्रोइड संस्करण, 11.1.3
कुल डाउनलोड 4,000,0900+
अनुप्रयोग आकार 53.3 Mb
पीसी विन्डोजमा जीबीवाट अनुप्रयोग अनुप्रयोगका सुविधाहरू
जीबीवॉट्स एप्पल सरल & द्रुत डाउनलोड!
GBWhatsApp पछिल्लो संस्करण!
तपाइँको अन्तिम व्यक्तिको विशेष व्यक्तिकोबाट लुकाइरहेको.
विशेष व्यक्तिबाट कलहरू असक्षम गर्दै.
निलो टिकटहरू र डबल टिकहरू लुकाउँदै.
पठाइएका सन्देशहरू सम्झँदै.
जूम गरेर सबैको प्रोफाइल फोटो हेर्दै.
धेरै विषयवस्तुहरू जुन तपाइँ लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
पीसी विन्डोजमा जीबीडब्ल्यूहट्स एपलाई डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका 10/8.1/8/7 र म्याक?
अहिलेको रूपमा, विन्डोज पीसी को लागी GBWhatApp को विकसित कुनै आधिकारिक अनुप्रयोग वा सफ्टवेयर छैन. The only way to install GBWhatsApp onaWindows computer is by using an Android emulator.
त्यहाँ पीसीमा GBWhatsApp स्थापना गर्न दुई तरिकाहरू छन्:
ब्लूस्ट्याक्स अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा जीबीडब्ल्यूट्स एप डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
Nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गरेर पीसीमा GBWhatsapp डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
Bluestacks प्रयोग गरेर पीसीको लागि GBWhatsapp डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि चरणहरू:
कृपया GBWhatsApp को लागी खोजी गर्नुहोस्.
तपाईं यस GBWhatsapp अनुप्रयोगको लागि खोजी परिणामहरू देख्नुहुनेछ. स्थापना क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईको गुगल खातामा लग इन गर्नुहोस् ब्लूस्ट्याक्समा गुगल प्लेबाट यस GBWhatsApp अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न.
GBWhatsapp अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई तुरून्त प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्.
स्थापना पूरा भएपछि, तपाईं आफ्नो पीसीमा जीबीडब्ल्यूएचट्स अनुप्रयोग चलाउन सक्नुहुनेछ.
पीसीको लागि जीबीडब्ल्यूहट्स एप डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका (विन्डोज 10/8/7 & म्याक)? भिडियो ट्यूटोरियल
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, म आशा गर्छु कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्नेछ विन्डोज र म्याकका लागि जीबीडब्ल्यूहट्स एप डाउनलोड गर्नुहोस्. अझै, यदि तपाइँसँग उही सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया दयालु मा साझा टिप्पणी बाकस. थप, तपाईलाई अझ सामान चाहिन्छ, त्यसो भए मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्. म तपाईलाई सहयोग गर्न सँधै खुशी छु.
विन्डिक्सका लागि विन्डोजको लागि पीसीमा डाउनलोड गर्नुहोस् 7, 8 & 10
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: gbwhatsapp 6.60 download for pc, gbwhatsapp 7.90 download for pc, gbwhatsapp apk download (2020 पीसी को लागी), gbwhatsapp apk for pc, gbwhatsapp app download for pc, gbwhatsapp for pc windows 7